[Fiarahamonina ] 11 Desambra, 2008 12:25
Tsy lavo fa potraka
Herintaona izay no naharesy ahy teo amin’ny fifidianana, herintaona ihany koa nangalako fisainana lalina. Ampy izay ny fahanginako, ka hanehoako ny tena marina. Io no nambaran’ingahy Hery Rafalimanana tao amin’ny Aceem Radio ny faran’ny herinandro teo. Nilaza izy tamin’izany fa adinon’ny TIM tanteraka ny tenany taorian’iny fifidianana ho Ben’ny tanàna ny taona 2006 iny. Ampy hisainako ny nataon’ity antoko ity ahy. Teknisianina tao amin’ny Magro aho no nantsoina ho kandidà ho Ben’ny tanàna. Manana andraikitra lehibe amin’ny tsy nahalany ahy izahay rehetra. Politika no nahalavo ahy, ary tsy maintsy politika no hiarenako.
" Tsy lavo aho fa potraka ", hoy ity filohan’ny delegasiona manokana teto amin’ny kaominina Antananarivo renivohitra teo aloha ity. Toa manome tsiny avy hatrany ny antoko TIM ny tenany tamin’ny fitsabahana be loatra nandritra ny fifidianana izay ho Ben’ny tanàna farany teo ireny. Tsy TIM aho, fa mpiasan’ny MAGRO hoy ihany izy.
Hanangana fikambanana aho mba hanampiako ny sahirana. Hirona any amin’ny sehatry ny asa soa, ary heverina fa hanana andraikitra goavana momba ity sosialy ity aho rehefa ho tonga ny fotoana ahazoako toerana indray. Momba ny zava-misy eto amin’ny tanànan’Antananarivo, dia nambarany, fa aleo hiasa ny Ben’ny tanàna Andry Rajoelina. Manana ny politika nandreseny lahatra ny vahoaka teto andrenivohitra izy, ka miandry izany ny vahoaka. Vonona ny hanome hevitra ny TGV koa ny lehilahy raha ilaina, fa tsy marisika ny hiditra hiara-mitantanana ao raha toa ka antsoin’i Andry Rajoelina hiara-hiasa aminy.
Raha iny fanambarana nataon’ingahy Hery Rafalimanana iny no atao indray mijery, dia tapaka hatreo ny fiarahany miasa amin’ny fitondrana. Mihevitra ny hanomana ny ho avy politikany izy manomboka izao. Hanao ahoana anefa no mety ho fitiavan’ny vahoaka azy amin’izay ?
source Madagascar Tribune
lundi 8 décembre 2008, par Penjy R.
Niniko nadika tsy nisy diso eto io lahatsoratra io satria nanaitra ahy ny namaky azy raha ny fijeriko manokana tokoa aloha dia tena tsy i Rafaly no tsy tian'ny mpifidy fa ny Tim t@ fotoan'andro! politika moa politika ihany ka asa na hirona any @ mpanohitra i Rafaly na hanao inona marina? azo antoka mantsy fa tsy adinon'ny olona tokoa ny zava-bitany tao anatiny 8 volana nisany izay ary tsy afenina fa betsaka ny resaka nande oe marary mafy sy ny sisa kanefa sihon-dresaka ihany moa ireny fa tsy misy voamarina hatreto.
Manarak'izany dia mitohy hatrany ny ady@ mpivarotra amoron-dalana etsy analakely ary toa tena hita mihitsy fa manampatra fahefana ireo mpisa ny cua maka ankeriny ireo entana amidy. Satria sady dakany ny entana no avy dia raofiny ao anaty kamio vola be avy eo no alain'izy ireo raha te haka ny entany ireto mpivarotra. Mbola fitaka ara-politika ihany koa satria nazava tsara ny fampielezan-kevitra natao ny tgv oe tsy hisy intsony izany mpivarotra hifanejika @ kaominina izany. Enga anie ka mba diso fiheno aho t@ izay.
Avadika ny resaka ka manolotra ireto bonus krismasy ireto indray aho:
Antsan'ny Kristy mp3 special noel
Avia ry Mino mp3
Iny lalana iny mp3
aleo fa omeko eto koa ilay hira kalon'ny fahiny "t@ iny lalana iny" tadiavin'i Ikalamako fa aleo mba @ taona 2009 ataoko Bonne Année ho azy sy ho anareo rehetra mpitsidika. LOL